Indlela yokukhohlwa uthando lomuntu oshadile
Esikhathini sethu, kungase kubonakale kungaqondakali kwabanye abantu ukuthi abesifazane abaningi bagwema izimo lapho bangaba khona nendoda eshadile. Noma kunjalo, kunjalo.
Naphezu kweziphakamiso zocansi, noma i-bacchanalia yemikhuba kwithelevishini nasemaphephandabeni, naphezu kokubonakala kunciphisa amandla emndenini, iningi labesifazane, njengamadoda, zama ukugwema ukuthintwa kothando. Kulokhu kukusiza ukuqonda okulula.
Uthando oluthathu - amasistimu ngokwawo awazinzile. Ikakhulukazi uma ihilela amadoda ashadile. Njengomthetho, bahlukana ngokushesha ngokushesha ngemva kokuvuka. Yiqiniso, kunezimo lapho kukhona khona ukuhlangana okuphindwe kathathu iminyaka, kodwa ezimweni eziningi ukukhawulwa komlingani kuba yinto esemqoka empilweni yomndeni, okuholela ekuhlolisweni okujulile kwamagugu. Umndeni uhlakazeka, okwenzeka kaningi, noma umuntu uyeka ukuxhumana kwakhe ohlangothini, okwenzeka kancane kancane. Njengomthetho, indlela yokuqhaqhazela isithangatheli iba ukutholakala komfazi wezomthetho wokuphinga. Futhi ingxenye encane yazo zonke amanoveli ashadile angahlala iminyaka.
Futhi nokho, kunezimo lapho bonke abathathu bekwazi ngoxantathu, kodwa bathule. Emashumini eminyaka, kungase kube khona umzabalazo indoda engenawo olahlekile futhi owesifazane ophumelele. Kunomuntu oyedwa oyinqobe - indoda ngokwakhe. Akumangalisi ukuthi kukholelwa ukuthi indlela ephumelela kakhulu yokubhubhisa unxantathu wothando kuyisinyathelo soyedwa kulowo oyedwa. Esikhathini seveli enendoda eshadile, ngokuvamile nje indoda ngokwayo iyakwazi ukukhetha nokuqeda ubuhlobo "ngamathathu".
Uma ukhona isikhathi eside phakathi kobudlelwano nomuntu oshadile, kuyoba nzima kuwe ukukhohlwa uthando lomuntu onjalo. Phela, ukuxhumana nomuntu oshadile kubhubhisa ukuzihlonipha kowesifazane kangangokuthi ukuphuma ebuhlotsheni naye kunzima kakhulu uma behlala isikhathi eside. Noma kunjalo kuwufanele! Uma ucabanga ukuthi ungakhohlwa kanjani uthando lomuntu oshadile, kufanele wazi imigomo eminingana eyisisekelo yokwakha ubuhlobo naye.
Into yokuqala okudingeka uyiqonde ukuthi akuwona wonke owesifazane ongathola uthando lomuntu oshadile. Kufanele uhlaziye okwedlule, ubudlelwane emndenini wabazali. Kungenzeka ukuthi igama elithi "uthando" lihlotshaniswa nawe ngamazwi "ukuphikisana," "ukuhlazeka," "ubuhlungu." Kulesi simo, ungazi ukuthi ungaphila impilo yonke kubantu abathintekayo, kuhlanganise namadoda ashadile, ngoba ubudlelwano nabo buzokusiza ukuba uvelise isimo somzwelo ekhaya lomzali. Ukuzijwayeza - akusho okuhle, futhi imikhuba emibi kuyadingeka ukuqeda. Ukuze ube nethuba lokukhohlwa uthando lomuntu onendandatho yomshado emunwe wakhe, udinga ukuthola amandla nesibindi sokubhekana nomthwalo wesikhathi esidlule. Uma kunzima kakhulu futhi kuphazamisa ubudlelwane phakathi kwabazali bakho phakathi kwabo, kuyoba nenjongo ngokwengeziwe ukuphendukela kwengcweti yengqondo ukuxazulula le nkinga.
Into yesibili ukuthi wonke owesifazane ocabanga ukuthi angayikhohlwa kanjani uthando lomuntu oshadile kufanele azi, lezi zindlela zokwandisa ukuzethemba. Ubudlelwano nomuntu oshadile buyinto eqinisekisiwe yokuzihlonipha. Ngokuvamile, abesifazane abaya ezincwadini ezinjalo kakade banokuzethemba okuphansi. Zizibona ziyizimbi, ziyiziphukuphuku, azifaneleki uthando. Ukungakholelwa kuwe kubangela izinkinga ebuhlotsheni obuqinisa kuphela futhi buqinise ukungakholwa. Kuvela umbuthano ononya: ukwehla ukuzethemba, abantu obathinteka kakhulu obahehayo.
Ngaphezu kwalokho, amadoda ashadile avame ukuba nesithakazelo sokuba nobuhlobo nabesifazane ababili noma ngaphezulu, angathululela kuphela amafutha emlilweni wezinkinga zakho ngokuzethemba. Bagcizelela ngandlela-thile ukuthi bazuze kanjani ekunakekeleni kwakho, bakusindise unesizungu esingenakugwema. Ngakho emva kokuphela kwendzaba enjalo owesifazane ngokuvamile udinga uhlelo olunzulu lokubuyisela ikhono lokuzithanda wena. Indlela enhle esimweni esinjalo ukubhala uhlu lwezinhlobo ezimbili zabantu. Uhlobo lokuqala lwabantu - abangani bakho, abajwayelene nabo, abamukelayo ngayo yonke inhliziyo yabo, njengalokho oyikho. Uhlobo lwesibili ngabantu abangathiwa ngezimpi zokucindezeleka ngokomzwelo. Bayakujabulela ukukucasula, uzama ukubukeka kangcono esizinda sakho. Bangakujabulela ukudideka kwakho noma okuhlangenwe nakho okungathandeki ngokugxeka kwabo. Ukuze ubuyisele ukuzethemba, ngemuva kokubona uthando lomuntu oshadile, okwesikhashana - inyanga noma ezimbili - zama ukuhlunga ngokuqondile umjikelezo wokuxhumana. Abantu abavela engxenyeni yokuqala yalolu hlu kufanele babe abangane bakho abangokomoya kanye nesisekelo sokusekelwa kokuziphatha. Futhi abantu abazibiza ngokwezindleko zakho, bavumele ukuba balahlekelwe okwesikhashana ithuba lokuxhumana nawe.
Inveli enendoda eshadile iyilingo elikhulu kumfazi ozinika injabulo kanye nokungajabuli ngesikhathi esisodwa. Thola amandla ngesikhathi sokuqonda ukungabi nalutho kobuhlobo obunjalo, hambani bese uzama ukukhohlwa uthando lomuntu oshadile.
Imithetho yokuphila komndeni
Uthando nendoda evela kwelinye izwe
Yini okufanele ngiyinike othandekayo wami ngosuku lwami lokuzalwa?
Kungenzeka yini ukuthi uthande ababili ngesikhathi esisodwa?
Umuntu oyithandayo - incazelo yokuphila, ingabe inhle noma imbi?
Ukuqashelwa okubonakalayo othandweni
Ukuphila okuhlangene ngaphambi komshado - inzuzo kanye nokuqeda
I-orgasm iyithinta kanjani impilo yowesifazane?
Ukubuyekeza kwe-movie "Wall-I"
Izinkondlo: ukuzilibazisa noma umsebenzi?
Ukubingelela ngokuqeda iziqu-2017 kubafundi bezigaba 9 no-11, othisha nabazali babo
Isobho semifino yendabuko
Izinkondlo ezinhle zikaFebhuwari 23, 2018
Izitsha zetafula lokugubha, zokupheka
Imicabango yabantu abashadile
Iphayi laseFrance elinommbila namatamatisi
USergey Lazarev waziqhenya ngezindiza yangasese, isithombe
Izitayela zezinwele zabesifazane abakhulelwe
Ummbila wokusanhlamvu emanzini amaningi